Miiska Kumbuyuutarka Shiinaha YF-GD003 Soo saaraha iyo Badeecadda | Yifan
ASTAAMAHA 4 Khaanado, 1 saxaarad kumbuyuutar
Maaddi Guddiga Melamine
QIIMEYNTA SHARCIGA 43.3 x 19.68 x 29.52 inji
Dhaldhalaalka dusha sare ee dhalaalaya ee dhalaalaya waa shay lama huraan u ah qolka dhalinyarada, xafiiska guriga, ama meel kasta oo loo baahdo goob shaqo oo shaqeyneysa.
Waxaad sidoo kale ku ridi kartaa miiskan qolkaaga jiifka, oo leh seddex khaanad oo sariirta agteeda ah sida armaajo sariirta dhinaceeda ah. Ama gees kasta oo ka mid ah qolkaaga fadhiga, qolka waxbarashada.
Cabbirka guud waa 120x60x76cm, waxaan u habeyn karnaa cabbir ballaaran sida 140x60x76cm, ama 160x60x76cm iyadoo lagu saleynayo codsadaha iibsadaha.
Miiska kombiyuutarka wuxuu la socdaa 3 khaanad khaanad, oo leh meel ku filan oo lagu xafidi karo dhammaan waraaqahaaga, faylashaada, dukumintigaaga ama joornaaladaaga.
Iyada oo leh dusha sare ee miiska, cabbirka L120xD60cm, waxaad ku keydin kartaa waxyaabo badan oo lagama maarmaan ah oo laga yaabo inaad rabto inaad gacanta ku haysato. Barta ugu weyn ee iibintu waa isku xirka miiska dushiisa iyo lugta, waa xagal wareegsan oo wareegsan taas oo xaqiiqdii indhaha kahelaysa.
Waxaa sidoo kale jira keyd kumbuyuutar la jiido oo ka hooseeya miiska dushiisa, taas oo ah dareen fiican markaad isticmaaleyso kumbuyuutar.
Maadadu waa MDF tayo sare leh, (MID DENSITY FIBERBOARD), oo ku jirta lacago cadcad oo dhalaalaya, oo ay ku jirto warqad madow oo qurxin ah.
Alaabta xafiiska ee casriga ahi waa inay lahaadaan meel kasta oo loogu talagalay shaqada ama waxbarashada. Sidoo kale waa hab fudud oo wax ku ool ah oo loo abuuro meel si buuxda u shaqeyneysa. Marka shaqada guriga ka bilow miiskan quruxda badan.
Naqshadeynta casriga ah iyo dhammaystirka
Qalabka darajada sare MDF
Dhammaystirka dusha sare ee tayada sare leh
kordhinta orodyahannada dhamaan khaanadaha si ay ugu fududaato marinka
Jir adag oo bixiya xasillooni iyo adkeysi
Fursadaha kaydinta badan ee laga helo desktop illaa khaanadaha
Nadiifinta dusha saafiga ah & fudud kulanka
Hore: Miiska Kombiyuutarka YF-GD002
Miiska kombiyuutarka ee xafiiska guriga ee casriga ah ...
Miiska kombuyuutarka ee barashada qorista cad ee guriga offi ...